Nzira Yokudzivisa Nayo Malware - Mazano kubva Semalt
Zvinyorwa zvinoratidzira zvinoshandiswa zvakasiyana-siyana zvezvinotyisa, kusanganisira mhondi yemakombiyuta, mavairasi, ransomware, adware, spyware, scareware, Trojan mahara uye mamwe mapurogiramu ane ngozi. Zvinyorwa zvinogona kushandisa zvikanganiso zvekuchengeteka kana kusagadzikana mune zvigadzirwa zvekushanda kwezvirongwa, mumashandisirwo kana shanduro dzisina ngozi dzeAdobe Flash Player, Java SE uye Adobe Reader. Migumisiro yavo inobva pakubhakwa kwehuzivi kunopesana nekombiyuta kuparara.
Zvakakosha kubvisa malware. Nokuda kweizvi, unofanirwa kugara uchiyeuka pfungwa dzinotevera dzakataurwa naJack Miller, Mutungamiriri Mukuru weVatengi Mukubudirira Semalt - affordable chapter 7 bankruptcy lawyers.
Kudzivirira neuchenjeri hwekuita paIndaneti
Kuvhara malware nekunzwisisa maitiro eIndaneti kunobvira. Iwe hausi iwe rubatsiro rwekombiyuta yemakombiyuta kana wezvigadziridza kuti ubvise mavairasi uye malware. Iwe unotofanira kumira kuisa nekukanda zvinhu zvisingakoshi. Kana zvimwe zvishandiso kana software zvisiri kushandiswa, iwe unofanira kuzvibvisa kubva pakombiyuta yako sekutanga. Nenzira imwecheteyo, kana iwe usina chokwadi newebsite yekutenderera, unofanira kuisiya uye uwane imwe nzira.
Vanokanganisa kazhinji vanotumira zvinhu zvoupenzi kuburikidza ne email. Zvakakosha kuti iwe usavimba nechimwe chinhu chakabatana neemail. Kunyanya paunogamuchira spam emails, haufaniri kuvhara kana kuisa chibatanidzi sezvo zvingave zvine mavharusi kana malware. Saizvozvowo, kana mumwe wako kana nhengo yemumhuri akakupa firiji kana DVD rine mafayira ane hutachiwana mauri, haufaniri kubvuma pachena. Iva nechokwadi chekuti wakaisa antivirus software pakombiyuta yako..Kana zvisina kudaro, zviri nani kuti usatamba maDVD.
Mamwe mabhokisi ekufambisa uye mahwindo akaedza kukanganisa makombiyuta ako. Iwe haufaniri kuvhara pavanosangana navo uye usabvuma kugamuchira hurongwa hwemagetsi. Rega ndiuye pano kuti ndikuudze kuti hakuna chinhu chakasununguka munyika ino. Tinofanira kubhadhara mari yee software yepamutemo, saka purogiramu yetivhidhiyo yakavharidzirwa haina kunaka pasina. Unogona kuvhara mahwindo akadaro neWindows Task Manager (Ctrl-Alt-Delete). Iwe unofanirwa kudzivisa kumhanya software kubva kune zvisingazivikanwi, kunyange kana webhusaiti inotaridzika chaizvo uye inyanzvi. Panguva imwecheteyo, iwe unofanirwa kudzivisa kushandiswa kwepafaira-kugoverana mabasa. Zviri nyore kune vanotengesa kutumidza mazita avo e-malware mushure mekuzivikanwa kwemafirimu emumhanzi, mavhidhiyo emimhanzi, uye mapurogiramu ekuedza vanhu kuti vadzivirire.
Bvisa malware ne authentic software
Pasinei nokuti wakachenjera kana kuti iwe unonetseka sei, kombiyuta yako inogona kutapukirwa chero nguva. Ndicho chikonzero iwe unofanira kubvisa malware nemavhidhiyo chete ne software chaiye uye yakarurama. Iwe haufaniri kuisa chigoni chausina chokwadi nezvazvo. Tora uchishandisa Windows Update uye uvandudze hurongwa hwako kamwe kana kaviri pavhiki. Iyo inokuzivisa nokukurumidza iwe kana mavandidzi aripo. Iwe unogona kuikwanisa nyore nyore kubva paIndaneti uye kuiswa kunotora mashoma mashomanana. Panguva imwecheteyo, zvakakosha kuchengetedza browser yako yakarongeka. Dharirai zvinyorwa zvitsva zvevhuraji kuti munakidzwe nezvinhu zvavo zvekare uye maitiro. Iwe unofanirwa kumhanya antivirus software kuti ugare wakachengeteka paIndaneti. Tendeukai nguva dzose uye muvandudze kamwe chete kana kaviri pamwedzi. Anti-malware, inozivikanwawo se-anti-spyware, inechikamu chakasimba chekombiyuta chero ipi zvayo. Iyi purogiramu yakachengetedza inochengetedza kombiyuta yenyu uye mapurogiramu enyu ezveshuwaridhi zvakachengeteka kubva kune zvinogona kutyisidzira uye mavairusi. Zvimwewo, unogona kushandisa Windows Firewall iyo yakanaka kudzivirira chimbo chako kubva kune malware uye mavairasi. Kana mapurogiramu e-mail yako asina kuisa spam zvakanaka, zvakakosha kuedza firimu ye spam nekukurumidza.